Voina tao anaty hamehana :: Namono mpandeha an-tongotra enina ambin’ny folo ireo loza teto Iarivo • AoRaha
Voina tao anaty hamehana Namono mpandeha an-tongotra enina ambin’ny folo ireo loza teto Iarivo
Naharaketana tatitra mafonja ihany ny akon’ny vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho teto an-drenivohitra, nanomboka ny 23 marsa hatramin’ny alahady 26 jolay lasa teo. Araka ny tarehimarika azo tamin’ny Borigady misahana ny lozam-pifamoivoizana eo anivon’ny Polisim-pirenena na ny BAC, etsy Tsaralalàna, dia nahatratra valo amby roapolo no namoy ny ainy tamin’ny lozampifamoivoizana, ka mpandeha antongotra avokoa ny enina ambin’ ny folo tamin’izy ireo ary dimy amby valopolo kosa ireo naratra. Ankoatra ireo ny fahasimbanjavatra tamin’ireo fitaovampifamoivoizana, toy ny môtô sy ny fiara.
Avy amin’ny loza nitranga roa amby roapolo tao anatin’ny vanim-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana sy ny fihibohana teto an-drenivohitra izay ireo antontan’isa ireo. Mpamily ny roa ambin’ny folo tamin’ ireo nindaosin’ny fahafatesana nandritra ny voina.
Fito amby enimpolo kosa ny tranga naharatrana olona. Nisy mpamily fiara sy môtô ary mpitondra bisikileta valo amby efapolo naratra niaraka tamin’ny olona mpandeha iraika amby roapolo sy mpandeha an-tongotra telopolo. Nahatratra enina ireo loza niteraka fahasimbana fiarampanjakana, izay nitranga teto andrenivohitra avokoa.
Nisy ihany koa anefa sady maromaro ireo lozam-pifamoivoizana nahitana fahamamoan’ny mpamily. Niisa fito amby roapolo ny tranga voaray sy nanaovan’ny polisin’ny BAC fizahana. Ny roa tamin’ireo no nahafatesana olona, saingy niharan’ny ratra ny olona lasibatra tamin’ny tranga efatra ambin’ny folo naharatrana olona ary ny iraika ambin’ny folo ambiny nahasimban-javatra. Tamin’ireo tranga nisy mpamily mamo ireo hatrany no nahitana mpamily valo sy mpandeha telo ary mpandeha an-tongotra roa naratra niaraka tamin’ny mpandeha antongotra roa hafa namoy ny ainy.
Voina vokatry ny fitrandrahana Lehilahy hita faty tao anaty lava-bato tany Andilana
Halabotry Roa vavy tratra namaky trano
Fanafihana sy vono olona Mpanampy an-trano maty notifirin’ny jiolahy
Lozam-pifamoivoizana Mpandeha roa namoy ny ainy nadonan’ny fiara tamin’ny hazo
Tifitra tao an-damosina :: Kaporaly enjehin’ny Fitsarana noho ny famonoana olona
Voina tany Mahajanga :: Zaza 7 taona novonoina sy nalevina an-tsokosoko
Baolina kitra – Barea Hamerina hanorina mihitsy Rabesandratana Eric